नयाँ खेती | मझेरी डट कम
ननिको छ –गोविन्दे । गाउँमा अँझै हुने नहुने सबै काम गर्छ । जवनीमा आँखा देखेन । अहिले जवानी घर्किन थाल्दै बूढो देखिएको छ । साह्रै चञ्चल छ । केही न केही उपध्रो गरिरहनु पर्ने । राम्रा काम अरूका भागमा परेकाले नराम्रो जति सबै काम ऊ आफैँ गर्छ । बाउआमा छउन्जेल भनेको मानेन । एसएलसी उँभो पढेन । इलममा पनि लागेन । न आफूले जान्यो न भनेकै मान्यो ।
गोविन्देकी स्वास्नी पनि ऊसँग ठुस्किएकी छे । एक साताजति भयो उसकी स्वास्नी ऊसँग ठुस्किएकी । उसले अनेक तरहले फकायो । मनाउन खोज्यो । उसकी स्वास्नी ऊसँग झन्झन् परपर हुँदै गई तर्सुवा गाई झैँ ।
बूढापाकाहरू त भन्थे –नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु । बेकारमा कुकुरले टोक्छन् । यहाँ आज उसलाई तिनै बुढा पाकाहरूको अर्तीले चिल्न थालेको छ । किराहरू त छैनन् –यहाँ । बद्लामा प्रविधिले नै चिल्न लागेको छ ।
गोविन्देका साथीहरू कोही काम लाग्ने छैनन् । दिनभरि चउरमा बसेर तास फिस्ने । साँझ भट्टीमा गएर घाँटी तन्काउने काम मात्रै गर्छन् । एक रूपैयाँको कमाइ छैन तीन रूपैयाँको खर्च भनेझैँ गर्छन् ।
गोविन्दे भने घर अघिको बजारमा सानो तर्कारी पसल चलाउँछ । पसल पनि स्वास्नीको करकरले गर्दा गरेको हो । आफ्नु बुताले त गोविन्देले केही काम जीवनमा गरेन । भला, पसलले उसको भातभान्सा र घर चलाएको छ ।
गएको हिउँदमा उसले पसलबाट भएको नाफाले टच स्क्रीनवाला मोबाइल किन्यो । सामसुङको मोबाइल । ठ्याम्मै पन्ध्र हजार तिर्यो । अनि भक्ते र प्रमेशसँग मोबाइलका अनेकओलीका टिरिकहरू सिक्यो । कसैले म्यासेन्जर सिकाइदिए । कसैले भाइबर खोल्न लगाए । स्काइपमा बोल्दा त फोटो पनि आउने । पैसा पनि नलाग्ने भएको देखेर गोविन्दे तीन छक्क पर्यो ।
उसले मोबाइल किनेको अर्को महिना स्वास्नीले पनि करकर गर्न थाली । उसले स्वास्नीलाई पनि सात हजारमा जिओनी कम्पनीको मोबाइल किनिदियो । औंलाले छुँदा चल्ने मोबाइल पाएर दुवै जोइपोई मख्ख परे । स्वास्नी तरकारी पसलमा हुँदा गोविन्दे घरको काम गर्थ्यो । त्यसबेलाँ दुई जोईपोई कहिले म्यासेन्जरमा च्याट गर्थे । लोग्ने पसलमा हुँदा स्वास्नी छोराछोरीका स्याहारमा हुन्थी । त्यसबेलाँ पनि लोग्नीस्वास्नी भर्खर बिहे गरेका नव विवाहिता झैँ स्काइपमा इत्तरिन्थे ।
‘बुझ्न त बुझ्थेँ । तपैँले भन्नुभा’को छैन । के बुझ्नु भन्या ।’ –केही भोल्युम ठूलो पार्दै गोविन्देले रामबिस्नेकासामु पाठ बुझाएर सन्तोष भएको विद्यार्थीले झैँ भन्यो ।
रामविष्णुले फेरि फकाएर पाठ दियो –‘कुरा बुझ् न गोविन्द । कुरा बुझ । मैले तिमेरूले एकान्तमा गरेका कुरा मैले खिच्ने भनेको हो त ? मूलाङ्खरे आफैँ खिच पो भनेको त । पहिले आफू खिच्नु । अनि कैल्यैकाहीँ बूढीलाई खिच्न लगाउनु । कुरो बुझिस् । सानासाना र मजाका पोज खिच्नु । अनि मान्छेले हेर्छन् । छन्छनी पैसा झर्छन् –ब्याङ्कबाट । पैसो लिने काममा म सहयोग गर्छु नि मोरा तँलाईं । किन डराउँछस् ?’
‘के भन्नु नि पैसा आउँछ मोरा । गरिबी स्वात्तै घट्छ । अनि घरघडेरी जोड्नु । छोराछोरीलाई राम्रा बोडिङ्मा पढाउनु । आफू पनि टु ट्वान्टीको पल्सर चढेर हिँड्नु । कति दुःख गर्छस् मोरा । तर्कारी पसल छ । ताजाताजा अरूलाई बेच्छस् । जहिल्यै पनि बासी र ओइलाएका मात्र आफू खान्छस् । ओइलाएका तर्कारी खाँदाखाँदा मोराको बुद्धि पनि ओइलाई सक्यो । आजै भन बूढीलाई । काम थाल । भटाभट् काम सक्नु अनि मलाई दिनु । म ब्लु टुथबाट मेरो मेमोरीमा सार्छु अनि यु ट्युबमा राख्दै गर्छु । ढिलो नगर ।’ यसपटक रामबिस्नुले पूरै भिडियो पूराण सुनायो ।
भोलिपल्ट पनि उसले स्वास्नीलाई रामबिस्नु प्रदत्त सल्लाहको नयाँ खेती गर्ने काइदा सुनाउन सकेनँ । ओच्छ्यानमा छट्पटाएको स्वास्नीले थाहा पाइहाली । उसैले कुरा उठाई । भनी –‘तँपाईंलाई सन्चो छैन जस्तो पनि छ । मनभरि पेटभरि भएर मलाई केही कुरा लुकाइरहनु भएको त छैन । साँझ खाना पनि रूचाएर खानु भएन । के हो ? मलाई किन नभनेको तपैँले ?’
उसले सोध्यो –‘किन सन्चो भएन ?’
साउतीकै सुरमा उसले पनि लोग्नेसँग जिज्ञासा राखी –‘सधैंको जस्तो कि फरक हुन्छ रमेशका बाउ .....?’ यति भनेर उसले लोग्नेलाई बत्ती निभाउन भनी ।
गोविन्देले कुरा बुझायो । केही प्राविधिक निर्देशन गर्यो । माउ बत्ती निभाएर बच्चो बत्ती बाल्यो । मोबाइलबाट फोटा खिचेर सनातनदेखि चल्दै आएको क्रीडा केलीमा दुवै आनन्दपथ हुँदै परमानन्दका यात्री भए । रमाए । स्वास्नी धर्ती भएर फैलिई । लोग्ने आकास भएर बर्सियो । खेती गराइ विगतकै शैलीमा थियो । आगतमा प्रविधिले केही लौह उत्तेजनाका बिजुली मिलिक्क चम्किए । मेधका नादमा दुवै नटराज र नटराज्ञी भए । आरम्भमा पुरुषको ताण्डव नाच नाँचियो । अन्त्यमा महिलाको लास्य भाव । आदिम सत्यलाई प्रविधिको फड्के साक्षी राखेर नथाकुन्जेल जिज्ञासाका पर्वतारोहणमा दुवै जब्बर आरोही भए । कतिन्जेल वर्षा भयो ? कतिन्जेल चट्याङ् पर्यो ? दुवैले हेक्का राखेनन् । रात्रिकालीन झरी बिदो भयो । पानी परेर भिजेको माटाको जस्तो स्निग्ध बास्ना कोठैभरि छरियो । सुत्ने यत्न गर्दा ‘कुखुरी काँ’ गरेको सुनियो । दुवैले तीन प्रहर रात पत्तै नभई बितेको बल्ल पत्तो पाए ।